180-360W 15A * 1ch 12-24VDC Triac CV ကိုမာစတာ Controller - တရုတ်ရှန်ဟိုင်း Euchips စက်မှုဇုန်
LED ကြိုးမဲ့ Controllers စီးရီး
300w စဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့ dimmable ကားမောင်းသူ EUP300A 0-10v -...
200W 24VDC CV ကို Triac ယာဉ်မောင်း
75W 12VDC 6.2A * 1ch waterproof CV ကို Triac ယာဉ်မောင်း
300W 24VDC 12.5A * 1ch CV ကို Triac ယာဉ်မောင်း
180-360W 15A * 1ch 12-24VDC Triac CV ကိုမာစတာ Controller
item အဘယ်သူမျှမ .: DIM105
input ဗို့အား VAC: 12-24
output လက်ရှိ VAC: 15A * 1CH
output ဗို့အား VAC: 12-24
output ပါဝါ W: 180-360
: Mode ကိုမှိန် Triac / ELV
Size ကိုမီလီမီတာ: 167 * 52 * 24
ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ Download Spec.
180-360W 15A * 1ch 12-24VDC Triac CV ကိုမာစတာ Controller DIM105
ထုတ်ကုန်အမည် 12V 24V 15A Triac Constant Voltage LED Dimmer
input ဗို့အား DC12-24V
output လက်ရှိ 15A max ကို
output ပါဝါ 12V: 180W max ကို; 24V: 360W max ကို
အလုပ် Temp ။ -20 – 50℃
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား 167(L)×52(W)×24(H) mm
ထုပ်ပိုး Size ကို 175(L)×57(W)×30(H) mm
ယခင်: 350/500/550 / 700mA 20W CC ကို 1-10V ယာဉ်မောင်း
နောက်တစ်ခု: 100-240VAC SCR အလင်းမှိန်ခြင်းလျော်ကြေးငွေ
Triac Dimmable ယာဉ်မောင်း
စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိ Triac ယာဉ်မောင်းဦးဆောင်ပြီး
Triac Dimmable ယာဉ်မောင်းဦးဆောင်ပြီး
Triac Dimmable ယာဉ်မောင်း 30w ဦးဆောင်ပြီး
Triac Dimmable 12V 20w ဦးဆောင်ပြီးယာဉ်မောင်း
Triac Dimmable Led ယာဉ်မောင်း 300ma 18w
Triac Dimmable ယာဉ်မောင်း 12V ဦးဆောင်ပြီး
60w Triac Dimmable Led ယာဉ်မောင်း
ရေစိုခံ Triac Dimmable Led ယာဉ်မောင်း
Triac Dimmable Led အလင်းယာဉ်မောင်း
300ma 12w Led Triac Dimmable ယာဉ်မောင်း
Triac Dimmable Led ယာဉ်မောင်း 180w
ယာဉ်မောင်း Triac Dimmable ဦးဆောင်ပြီး
ပူးတွဲ Triac Dimmable ယာဉ်မောင်းဦးဆောင်
12V 24v 150w Triac ယာဉ်မောင်းဦးဆောင်ပြီး
Triac Dimmable Led ယာဉ်မောင်း 1300ma
20w Triac Dimmable ယာဉ်မောင်းဦးဆောင်ပြီး
12vdc Triac Dimmer ယာဉ်မောင်း
Triac အလင်းမှိန်ခြင်း Driver
75W 6.2A * 1ch 12VDC 2.4G CV ကိုယာဉ်မောင်း LED
12W 12VDC 1A * 1ch CV ကို Dali ယာဉ်မောင်း
75W 24VDC 3.1A * 1ch CV ကို Triac ယာဉ်မောင်း
24W 24VDC Triac CV ကိုယာဉ်မောင်း
Edge Controller စီး 2A * 8ch